विज्ञान/प्रविधि : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
महेन्द्र आदर्श उमाविमा सिसि क्यामेरा जडान
अनिश शर्मा गैरे, गुल्मी फाल्गुण २६। महेन्द्र आदर्श उमाबि वामीटक्सार गुल्मीमा सिसि क्यामेरा जडान गरिएको छ । बिद्यालयका प्राचार्य भिमलाल सापकोटाको केही महिना अघि भएको अष्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा वामी ५ अर्छुङ्ग निवासी एक ब्यक्तित्वले सिसि...
गुल्मीमा सोनालिका ट्याक्टरको अधिकृत विक्री सुरु
प्रेम सुनार, गुल्मी फागुन ७ । विश्वभरको ग्रामिण भेग सम्म वजार विस्तार गर्न सफल सोनालिका ईन्टरेनेशनलले उत्पादन गरेको सोनालिका ट्याक्टरको विक्रि वितरण आज देखि गुल्मीको सदरमुकामबाट सुरु भएको छ । उक्त कम्पनीबाट अधिकृत विक्रेताको जिम्मेवारी...
गुल्मीका ग्रामीण बजारमा ल्याण्डलाइन फोन विस्तार
अनिल खत्री, गुल्मी पुष २८ । नेपाल टेलिकम गुल्मीले ग्रामीण भेगमा तार रहित ल्याण्डलाइन फोन बिस्तार गरेको छ । जिल्लाको सदरमुकाम तम्घास बाहेकका ग्रामीण भेगमा रहेका मुख्य बजारमा ल्याण्डलाइन फोन बिस्तार अभियान चलाइएको टेलिकम गुल्मीका...
सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यलाई फाइदा
मेलवर्न, मंसिर २४ । सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने हालै अष्ट्रेलियामा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानिसको तनाब, चिन्ता र खुसीबीचको सम्बन्धकाबारेमा अध्ययन गर्दा यस्तो भेटिएको...
उर्जा संकटमा रहेको बुर्तिबाङमा नयाँ विद्युत भित्रियो
राम सुवेदी, बागलुङ मंसिर ४। विस्तारिदै गएको बुर्तिबाङ बजारमा सधै अभावका रुपमा खडकिएको उर्जा संकटलाई ध्यानमा राख्दै शुक्रबारबाट बुर्तिबाङमा बजारमा नयाँ विद्युत भित्रिएको छ । बुर्तिबाङमै उत्पादन भएको रिठाखोला लघु जलविद्युत आयोजनाबाट यहाँसम्म विद्युत विस्तार...
रिघा मनेवा दरमखोला परियोजनाको लागी शेयर खुल्ला
कमल पौडेल, बागलुङ असोज ९ । वामी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.को दोश्रो साधारण सभा गुल्मीको वामीटक्सारमा सम्पन्न भएको छ। सो साधारण सभाले कम्पनी मार्फत निर्माण हुन लागेको रिघा मनेवा दरमखोला जल विद्युत परियोजनाको लागी यहि असोज...
५० करोड याहू प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट ह्याक
एजेन्सी । इन्टरनेट कम्पनी याहूले आफ्ना लगभग ५० करोड प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट ह्याक भएको पुष्टी गरेको छ । ह्याक गरिएका डाटामा प्रयोगकर्ताको नाम, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर, जन्मदिनको विवरण र पासपोर्ट समेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ...
आइफोन ७ किन्ने कि अरु मोबाइल किन्ने त ?
साझा नेटवर्क, काठमाडौं असोज ४ । सगरमाथा टेलिभिजनबाट एक मात्र सुचना र प्रबिधि बारे प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘आइटी ग्यालरी’को भाग २१ सार्बजनिक भएको छ । यस कार्यक्रममा सुचना प्रबिधि सम्बन्धि थुप्रै नै जानकारी मुलक कुराहरु...
सामुदायिक रेडियो स्काई छैठौ वर्षमा प्रवेश
सामुदायिक रेडियोलाई व्यवसायीक सरह न र्हेन अध्यक्ष पन्थीको आग्रह ! टोपलाल अर्याल, गुल्मी असोज २। सामुदायिक रेडियो स्काई ९०.४ मेगाहर्ज शनिबारबाट छैठौ बर्षमा प्रवेश गरेको छ। बार्षिक उत्सव तथा ५ दिने रेडियो उद्घोषण तालिमको उद्घाटन समारोहमा...
ग्यालेक्सी नोट ७ विमानमा प्रयोग गर्न नपाइने
भारतको नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सामसुङ ग्यालेक्सी नोट ७ स्मार्टफोन हवाइ जहाजमा प्रयोग गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । डीजीसीएले सूचना जारी गर्दै फ्लाइटका दौरान यो मोबाइल अन र चार्ज पनि नगर्न हवाइ यात्रु र एयरलाइन्सहरुलाई...
सामाजिक संजालको सदुपयोग गर्दै यूवाहरु
कृष्ण सारू मगर, मलेसिया भदौ १८ । जितपुर गाबिस ७ धनकुटा जिल्लाको जितपुर गाबिस वार्ड नम्बर ७ स्थित प्राथमिक तह सम्म रहेको श्री सरस्वती प्राथमिक विधालय ढोडे हिकिचुङ्ग बाट शिक्षाको पहिलो ज्योति पाएका पूर्व विधार्थीले...
फेसबुक चलाउनुहुन्छ, केही छैन गोप्य
तपाईंको फेसबुक वालमा जो विज्ञापन देखा पर्दछन् ती देखेर तपाईं कहिलेकाहीँ छक्क पर्नुहुन्छ होला, फेसबुकले कस्तो आफ्नो मनकै कुरा बुझेर आफुसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरु नै देखाइदिएको होला भनेर । तपाईंको परिवारका फेसबुकवाला कसैको जन्मदिन छ...
पोखरामा पहिलो पटक मोवाईल मेला हुने
कविता घर्ति मगर, कास्की श्रावण २६ । पोखरामा पहिलो पटक मोवाईल मेला हुने भएको छ । पोखरा इलेक्ट्रोनिक्स ब्यवसायी संघको आयोजनामा साउन २८ गतेदेखि सुरु हुने मेला पाँच दिन सम्म चल्नेछ । पृथ्बीचोक स्थित पोखरा विजनेश...
बिद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीलाई सौर्य बत्ति हस्तान्तरण
गुल्मी, आषाढ २४ । बैकल्पिक उर्जा प्रवद्धन केन्द्रले गुल्मि क्षेत्र न.३ पिपलधारा स्थित श्री गणेश माध्यमिक बिद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पिपलधारामा ४/४ किलो वटा क्षमताको सौर्य बत्ति जडान गरीने भएको छ । नेपाली कांग्रेस पिपल...
एनसेलबाट भारतमा १.९९ रुपैयाँमा कल गर्न सकिने
काठमाडौं, आषाढ २१। एनसेलका ग्राहकले भारतमा अझ सुलभ शुल्कमा कुरा गर्न पाउने भएका छन् । एनसेलले भारतको कल महशुललाई ३३ प्रतिशतले घटाउँदै ‘इन्डिया कलिङ’ योजना ल्याएको छ । यो योजना अन्र्तगत ग्राहकले अब करबाहेक १.९९...